नैतिक व्यवहार र सांस्कृतिक भिन्नता - अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायहरु
नैतिक व्यवहार र सांस्कृतिक भिन्नता – अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायहरु
हामी यो नीतिशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विकास कार्यहरू र प्रक्रियाहरू सांस्कृतिक पक्षहरू र नीतिशास्त्र संग सम्बन्धित छन् भिन्नता छ के को एक स्पष्ट अवधारणा आवश्यक छ.
Colins शब्दकोश सही र गलत बारेमा नैतिक विश्वास र नियम रूपमा नीतिशास्त्र परिभाषित. एक विशेष प्रकारको एउटा ethic व्यवहार असर एउटा विचार वा नैतिक विश्वास छ, मनोवृत्ति, र मान्छे को एक समूह को दर्शन. वेबस्टर शब्दकोश असल र खराब र नैतिक कर्तव्य र दायित्व छ के साथ गर्नुहुन्छ कि एक अनुशासन रूपमा परिभाषित, वा आचरण को सिद्धान्त एक व्यक्ति वा समूह परिचालक रूपमा. Larrouse, एक फ्रान्सेली शब्दकोश, भनेर नैतिक को आधारभूत ध्यान केन्द्रित दर्शन एक भागको रूपमा परिभाषित, वा कसैले को आचरण को आधार हो भन्ने नैतिक सिद्धान्तहरू सेट रूपमा.
अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता सांस्कृतिक पक्षहरू छन् के थप हल्ला induce, जो गलत बुझयो र नैतिक मतभेद संग भ्रमित छन्.
आजकल, एक पूर्ण रूपमा जडान संसारमा, यसलाई सांस्कृतिक मतभेद सजग नभइकन सफल व्यापार गर्न सम्भव छैन.
हामी विश्लेषण गर्न दुई महत्त्वपूर्ण पक्षलाई छ, सांस्कृतिक मतभेद महत्त्व बारेमा.
आन्तरिक व्यापार वातावरण विश्लेषण गर्दा पहिलो छ, र दोस्रो हामी बाह्य वातावरण दृष्टिकोण गर्दा हो, स्थानीय र वैश्विक, हाम्रो उत्पादन वा सेवाहरूमा बिक्री गर्न. यो एक बहुसांस्कृतिक काम वातावरण छ महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यो फरक दृष्टिकोण र समस्या समाधान बारे धनी brainstorms को विकास गर्न अनुमति दिन्छ.
फरक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू, सामान्यतया, समाधान विभिन्न मानसिक मोडेल र समस्या विभिन्न दृष्टिकोण छ, जो टीम को काम र परिणाम मा एक ठूलो क्षमता सिर्जना.
साथै, यसलाई गलत अर्थ जोगिन मदत गर्छ, जब विशेष मुद्दाहरू संग काम, उत्पादन वा सेवा विशिष्ट क्षेत्र वा देशमा ग्राहकहरु 'आवश्यकताहरू पूरा गर्दैन बारेमा.
दोस्रो पक्ष विश्वव्यापी व्यापार गरिरहेको संग सम्बन्धित छ.
भनेर हाइलाइट गर्न आवश्यक सांस्कृतिक पक्षहरू छन्: प्रोटोकल, धर्म, रंग र तिनीहरूको अर्थ प्रयोग, को फैाजी भाषा, खाना भन्सार र उपहार.
त्यहाँ छ, पनि, विभिन्न संस्कृति बारे अर्को दृष्टिकोण, जो Geert Hofstede हो, र सांस्कृतिक आयाम विश्लेषण. उनीहरु: पावर दूरी सूचकांक, Individualism, Masculinity, अनिश्चितता बचाउ सूचकांक र लामो अवधि अभिमुखीकरण. आफ्नो विधि को एक सम्भव प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार ठीक छ. देशहरूको दर्जनौं को स्कोर आफ्नो वेब साइट मा उपलब्ध छ.
कारोबार कारोबार र नैतिकता नैतिकता हो. धेरै मानिसहरू विकास गर्न प्रयास गर्ने खैरो क्षेत्र, र असफलता गर्न बहाना रूपमा प्रयोग गर्न वा अनुमति वा अस्वीकार्य नैतिक व्यवहार वा परिस्थिति समर्थन गर्न, अवस्थित हुँदैन.
पत्रुस Drucker बाट ठूलो वाक्य थियो, एक रिपोर्टर सोधे के उहाँले एक व्याख्यान मा सिकाउन हुनेछ, आचार बारेमा. उहाँले यो संसारमा सबभन्दा छोटो एक हुनेछ भन्ने जवाफ दिए, हामीले भन्न हुनेछ: "तपाईं केहि लागि ऐनामा आफूलाई हेर्न सक्छन् भने तपाईं के गर्न लाग्नुभएको, यो के छैन। "
नैतिकता नैतिक गर्दै, र कुनै क्षति प्रकुपित छैन, व्यापार, वातावरण, सहयोगी, साथी, छिमेकी, मित्र, र यति मा.
म धेरै पढ्न भनेर एउटा साधारण विचार, यो कि घूसखोरी अपेक्षा र केही देशहरूमा सामान्य छ छ. घूसखोरी संसारको कुनै पनि ठाउँमा गलत छ. यसले मलाई गाह्रो छ, केही मानिसहरू हुन् भनेर विश्वास गर्न, गम्भीर मान्छे, भनेर अभ्यास समर्थन र यसलाई केही ठाउँमा प्राकृतिक छ भनेर भन्न.
घूसखोरी अवस्थित गर्न, हामी कम्तीमा दुई अभिनेता आवश्यक छ, कि "दान" एक र रिसीभर, लामो र पुरानो प्रक्रिया के भयो थियो, जहाँ शक्तिशाली प्रस्ताव लाभ, उपहार र घूस आफ्नो चासो चाँडै उपस्थित छ, र केही विश्व क्षेत्रहरु मा कि प्रक्रिया थप सामान्य बन्न. यो के म चाहन्छु व्याख्या गर्न भन्दा मान्छे किन्न सजिलो छ.
मा 1999, म एक स्थानीय अखबार पढ्न, वा पत्रिका, एक निरर्थक, विश्वास गर्न गाह्रो, तर यो वास्तविक हो र म आज सम्म केही ठाउँमा भनेर लेख छ कि लाग्छ. एक विकसित देश बाट कूटनीतिज्ञ भने, एक उदीयमान देशमा, र यो लेखिएको छ, जस्तै केहि: "जसले पैसा भएको आदेश बनाउँछ". म घूसखोरी केही क्षेत्रहरु मा विस्तार गरिएको कसरी थप टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन भनेर विचार.
म पढ्न अर्को बिन्दु, यो प्रत्येक देश बनाउँछ वा आफ्नो व्यापार नैतिक स्तर व्याख्या छ. म यो हो भनेर विश्वास, पनि, साँचो छैन. प्रत्येक देश "भ्रष्टाचार दूषण" को एक स्तर छ, कि सन्दर्भ हुनुपर्छ. एक अवलोकन, भ्रष्टाचार मात्र गरिब देशहरूको एक विशेषता छ. हामी यसलाई पाउन, पनि, विकसित देशहरूमा, र बारम्बार.
त्यसैले, नैतिकता एउटा कुरा हो, व्यापार नियम र सांस्कृतिक पक्षलाई अर्को छन्.
सांस्कृतिक पक्षलाई, र आफ्नो particularities सामना गर्न कसरी, अध्ययन र प्रत्येक एक को चासो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विकास गर्न चाहन्छ भन्ने निर्भर, र यो बारेमा suppositions गर्नुअघि आवश्यक र नैतिक मतभेद कि जिम्मेवारी प्रत्यायोजन छ.
मार्नु, चोरी गर्न र अरूलाई संसारमा कुनै पनि ठाउँमा एक नैतिक स्वीकार्य व्यवहार छैनन् हानि. व्यापार नियम मानव जगतले गरेको छन्, र एक नैतिक वा अनैतिक तरिकामा पछि, आफ्नो अन्तस्करण र शिक्षा भनेझैं.
द्वारा: मारियो लुइस टावारेस फरेरा
ग्लोबल उद्यमशीलता सप्ताह →